ရီးယဲလ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအဖြစ် စီရော်နယ်လ်ဒိုထက်ရာအူးလ်ကို ကာဗာဟာလ်ရွေးချယ်
Cristiano Ronaldo ဟာ ရီးယဲလ်ရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံး မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ Carvajal
27 Jul 2018 . 5:27 PM
ရီးယဲလ်အသင်းနောက်ခံလူ ကာဗာဟာလ် Carvajal က စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှေက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အသင်းရဲ့ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမား မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာဗာဟာလ်ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ တွဲဖက်ကစားခဲ့ပြီး အခု သူ့ရဲ့သုံးသပ်မှုက အံ့အားသင့်စရာကောင်းနေတယ်။
ကာဗာဟာလ်က စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အရည်အသွေးကို အမှတ်ပြည့်ပေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားက စပိန်ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး ရာအူးလ် Raul သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားက ဘယ်သူလဲလို့ မီဒီယာတွေရဲ့ မေးမြန်းမှုကို ကာဗာဟာလ်က”ရာအူးလ်ပါပဲ။ သူသာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ထာဝရအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ရာအူးလ်က အလုပ်ကြိုးစားမှုနဲ့ အားစိုက်ထုတ်မှုကို အခြေခံပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့တာဖြစ်သလို သူဟာ အသင်းလိုက်ကစားပုံကောင်းတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ သူက အရမ်းကြီးပြေးနိုင်တဲ့သူ၊ ဘောလုံးထိန်းသိမ်းမှု ကောင်းတဲ့သူ၊ ခေါင်းတိုက်ကောင်းမွန်သူ မဟုတ်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ရာအူးလ် သွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးတွေ၊ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှုတွေအရ သူဟာ ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဖြေကြားခဲ့တယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော၊ ကာဗာဟာလ် ပြောသလိုပဲ ရာအူးလ်ဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုထက် ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို သဘောတူရဲ့လား . . .
La Liga games: 550
La Liga goals: 228
Trophies won: La Liga x6, Champions League x3,
UEFA Super Cup x1, Supercopa de Espana x4,
Intercontinental Cup x2
ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်း
La Liga games: 292
Trophies won: La Liga x2, Copa del Rey x2,
Champions League x4, Club World Cup x3,
UEFA Super Cup x2, Supercopa de Espana x2
Cristiano Ronaldo ဟာ ရီးယဲလျရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံး မဟုတျဘူးလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ Carvajal
ရီးယဲလျအသငျးနောကျခံလူ ကာဗာဟာလျ Carvajal က စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဟာ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှကျေ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးတဲ့သူဖွဈခဲ့ပမေယျ့လညျး အသငျးရဲ့ထာဝရအကောငျးဆုံးကစားသမား မဟုတျဘူးလို့ သုံးသပျခဲ့ပါတယျ။ ကာဗာဟာလျဟာ ရီးယဲလျအသငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈကနေ ၂၀၁၈ ခုနှဈအထိ တှဲဖကျကစားခဲ့ပွီး အခု သူ့ရဲ့သုံးသပျမှုက အံ့အားသငျ့စရာကောငျးနတေယျ။
ကာဗာဟာလျက စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အရညျအသှေးကို အမှတျပွညျ့ပေးခဲ့ပမေယျ့လညျး ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံးကစားသမားက စပိနျဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး ရာအူးလျ Raul သာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံးကစားသမားက ဘယျသူလဲလို့ မီဒီယာတှရေဲ့ မေးမွနျးမှုကို ကာဗာဟာလျက”ရာအူးလျပါပဲ။ သူသာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ထာဝရအကောငျးဆုံးကစားသမားလို့ ကြှနျတျော ယူဆပါတယျ။ ရာအူးလျက အလုပျကွိုးစားမှုနဲ့ အားစိုကျထုတျမှုကို အခွခေံပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့တာဖွဈသလို သူဟာ အသငျးလိုကျကစားပုံကောငျးတဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါ။ သူက အရမျးကွီးပွေးနိုငျတဲ့သူ၊ ဘောလုံးထိနျးသိမျးမှု ကောငျးတဲ့သူ၊ ခေါငျးတိုကျကောငျးမှနျသူ မဟုတျပမေယျ့ အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ရာအူးလျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးတှေ၊ စှမျးဆောငျခဲ့မှုတှအေရ သူဟာ ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးကစားသမားလို့ ကြှနျတျော သတျမှတျခဲ့တာဖွဈပါတယျ”လို့ ဖွကွေားခဲ့တယျ။ ပရိသတျကွီးရော၊ ကာဗာဟာလျ ပွောသလိုပဲ ရာအူးလျဟာ စီရျောနယျလျဒိုထကျ ပိုကောငျးတယျဆိုတာကို သဘောတူရဲ့လား . . .
ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စှမျးဆောငျရညျမှတျတမျး